Tirada dadka magangalyo doonka oo siyaaday iyo Soomaalida oo hoos u dhacday | Somaliska
Warbixin ay soo saartay Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket) ayaa soo bandhigtay in ay siyaaday tiradada dadka magangalyada ka dalbaday Swede. Sanadkii la soo dhaafay 31,901 qof ayaa magangalyo ka dalbaday Sweden marka loo barbar dhigo sanadkii 2009ka oo ay 24,232 qof ay magangalyo dalbadeen. Sadex meelood 1 meel ayaa sharci la siiyay dhamaan dadkii iska dhiibay Sweden ayadoo laanta Socdaalka ay sheegtay in ku dhawaad dhamaan dadkii isdhiibay kiisaskooda la xaliyay. Dadka ugu badan ee Sweden iska dhiibay sanadkaan ayaa ahaa Serbiyanka ayadoo loo aanaynayo arintaas markii Midowga Yurub ay ka qaadeen shuruudii visada ay ku soo gali jireen Yurub. Dadka labaad ee ugu badnaa magangalyo doonta ayaa ahaa Soomaalida balse arintaas ayaa isbedel ku yimid bartamihii sanadka ayadoo uu aad hoos ugu dhacay tirada soomaalida ee magangalyo doonta ka ah. Arintaas ayaa loo aaneynayaa ka dib markii la joojiyay mideynta reeraha Soomaalida taasoo keentay in dadkii Isdhiibi jiray ay soo gali waayaan Sweden ama ay wadamo kale ka door bidaan. Dhinaca kale Laanta Socdaalka ayaa sheegtay in waqtiga ay ku qaadato in ay ku xaliso kiisaska uu hoos u dhacay 70%. Migrationsverket.se
Warbixin ay soo saartay Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket) ayaa soo bandhigtay in ay siyaaday tiradada dadka magangalyada ka dalbaday Swede. Sanadkii la soo dhaafay 31,901 qof ayaa magangalyo ka dalbaday Sweden marka loo barbar dhigo sanadkii 2009ka oo ay 24,232 qof ay magangalyo dalbadeen.
Sadex meelood 1 meel ayaa sharci la siiyay dhamaan dadkii iska dhiibay Sweden ayadoo laanta Socdaalka ay sheegtay in ku dhawaad dhamaan dadkii isdhiibay kiisaskooda la xaliyay.
Dadka ugu badan ee Sweden iska dhiibay sanadkaan ayaa ahaa Serbiyanka ayadoo loo aanaynayo arintaas markii Midowga Yurub ay ka qaadeen shuruudii visada ay ku soo gali jireen Yurub. Dadka labaad ee ugu badnaa magangalyo doonta ayaa ahaa Soomaalida balse arintaas ayaa isbedel ku yimid bartamihii sanadka ayadoo uu aad hoos ugu dhacay tirada soomaalida ee magangalyo doonta ka ah.
Arintaas ayaa loo aaneynayaa ka dib markii la joojiyay mideynta reeraha Soomaalida taasoo keentay in dadkii Isdhiibi jiray ay soo gali waayaan Sweden ama ay wadamo kale ka door bidaan.
Dhinaca kale Laanta Socdaalka ayaa sheegtay in waqtiga ay ku qaadato in ay ku xaliso kiisaska uu hoos u dhacay 70%.
Sweden oo Soomaali ka soo qaadeysa xeryaha qaxootiga
January 4, 2011 at 09:56
Asc dhaman umada somaliyed o kala xaniman somalidu waxay dhahda wayel tag lama dhaho e waxay kutagan ya latusaa kikastaba ha ahaa teeh waxan oranlahaa dadalka hala wado o yan ladalin wadna mahadsantihin jimcale na waxu mudanyahay abaalmarin wa marki dowlad somali dhalato insha alah
sax waaye waa in dadaalka labadiyaa jimcaalle ha. caajisin shacabka somaliyeed waa ogyihihiin qofkii baahidooda ka hadlo adigana waxaad mudantahay abaalweyn wabillahi tow fiiq
asc dhamaan umada somakiyed waan salamay wa sax jimcaale waa nin iska xilsaray in uu uqabto dadka dhibatesan waxi karankisa ah lkn waxa layab ah in malinkasta umada somalied ay usoo tahriban wadan ayna lahen wana ku faraxsanahay sida ay swedan u xayirtay dadka soomalida ah ee swedan imaan lahaa wabilaahi tow fiiq
asc dhaman umada somaliyeed waxan ilah kaga baryaya inuu isu dumo qalbiyadoda waxana mahad uga celinayaa anigoo ku hadlayo magaca SFP in nairbi hadalka uu wado mr jmcale iyo dadalada weyn oo ka wada scdnvian ka gar ahan swden waxan oran lahaa jaza kalahu qeyr ogow wanag kasta oo loo sameya umada somaliyed ilahay baa qeyr ka sinayo anagana waxan kugu haynaa qalbiga/iyo tariiqda somaliyd ayad kaga jirtaa page one dadalkana hala sii kordhiyo ayan leyahay umada somaliyede (somaliyey toso toso isku tirsada had ba qoskina tagta daran tagera waligiina ayan ku soo kobayaa)alow somali midey amin amin amin bye mr digfer
Somali Ku Nool Uganda says:
Assalamu Caleykum All.
waad ku mahadsan tihiin sida aad u dhiibateen Arragtidiina, ruux kasta oo wax u qabta dadkiisa iyo dalkiisa waxaa u abaalgudi doono waqtiga iyo wax garadka dadkiisa.
Anigu waxaan qabaa in ruux kasta oo Somali ah uu isku tashto Aaminno Allah kana shaqeyo sidii uu si raaxaa uu kugu noolaan lahaa wadankeenii asigoo ka walwal qabin cidtiisaa oo ka maqan.
Waxaan kula Talin lahaa Dadka Somaliyeed ee ku Nool wadanka Sweden ee Haysto Passport-ka 1951 in ay ayagu La doodaan Dawlada Sweden waayo Qax ayey u leyihiin in loo keeno dadkooda sharuud la’aan hana u diraan dacwad UN siiba laanta Qaxootiga.
asc kuli.waxaan jeclahaay, walaalo ina ku weydiyo
labada qofod oo is qabo oo caruurta isku leheyn
side kula tahay kenistoda.
ile gurka waa xaqe, odaygeygana.mardhaw ayuu marey indiyu viyuga,
Waa mahadsantihiin ikhyaarta noo reebtay fariimaha. Najma haddii aan isku dayo suaashaada runtii wixii dhici doona allah ayaa og balse sharciga hada taagan cid ilmo isku dhashay iyo cid aan isku dhalinba waa qabanayaa oo shuruudi waxay tahay in qofku uu la yimaado baasaboor (Sweden ma aqoonsana baasaboorka Somaliga) sidaa darteed macquul uma ahan Soomalida in ay Sweden yimaadaan.
Haddii shuruudaas la qaado oo hada rajada ay fiicantahay, waxaa jira sharci kale oo oronaya dadka aan wax isku dhalin in uu qofka joogey Sweden 4 sano, shaqeeyana taas ayaa caqabad kugu noqon karta haddii aad ka badbaado shuruuda baasaboorka.